Igumbi lokulala eliyisikwele esingu-55-square elinobhavu wokubuka olwandle wekhwalithi ephezulu/Ukulandwa kwamahhala nokwehliswa/Kuhlanganisiwe nebhulakufesi/Ithaveni esekelwe kanye nebha yekhofi ezindaweni zomphakathi - I-Airbnb
Igumbi lokulala eliyisikwele esingu-55-square elinobhavu wokubuka olwandle wekhwalithi ephezulu/Ukulandwa kwamahhala nokwehliswa/Kuhlanganisiwe nebhulakufesi/Ithaveni esekelwe kanye nebha yekhofi ezindaweni zomphakathi
Ikamelo e-i-villa ibungazwe ngu-Alisa
U-Alisa Ungumbungazi ovelele
1. Indlu itholakala endaweni eyi-half-hill villa, ebheke echibini lase-Erhai ukusuka endaweni ephakeme, enombono omuhle olwandle. Ikamelo liyikamelo elilodwa elizimele ku-villa, elinombhede omkhulu wamamitha angu-2 × 2. Ingakwazi ukuhlalisa abantu abadala ababili njengejwayelekile, futhi ayilungele imibhede eyengeziwe kanye nabantu.
2. Izakhiwo zezindlu zinhle kakhulu, njengeziphephetha-moya, okokulala okulungele isikhumba, imicamelo ye-latex, indawo yokugezela ehlukene, indawo eyomile nemanzi, indlu yangasese ehlakaniphile, njll. Ngicabanga ukuthi uhambo lwakho kufanele lube okuhlangenwe nakho okungcono kakhulu nokuphumula okungcono kakhulu. . Lezi nginakho konke ukulungele ngawe.
3. Indlu ifakwe izindawo eziningi zomphakathi.Isibhakabhaka esitezi sesihlanu silungele osaziwayo be-inthanethi ukuthi bangene bathathe izithombe.Kunesiteshi setiye sokwenza itiye endaweni yomphakathi esitezi sesithathu, indawo yokudlela yasekuseni. esitezi sesibili, nesigaxa kanye lelivakalako endaweni yomphakathi esitezi sokuqala. Ungase futhi ujabulele isikhathi sokungcebeleka nsuku zonke e-esitolo ngaphandle ziyacima.
4. Uma libalele, ungabuka ukushona kwelanga eDali kusihlwa, nezintaba zaseCangshan ekushoneni kwelanga, ngezinye izikhathi isibhakabhaka sigcwele amafu abomvu, amahle kakhulu.
5. Kokubili ibha yewayini esitezi sokuqala sohlu nendawo yokudlela esesitezi sesibili inga-oda ukudla futhi ihlanganise iziphuzo, ukuze ungakhathazeki ngokudla.
6. Ungasiza ukuthintana nokuqasha imoto, ukuqasha imoto noma ukuvakasha, ungathumela imoto emnyango wohlu.
1. Indawo yokuhlala yakhiwe umklami.Ngesisekelo sokugcina ukunethezeka okuphezulu kwegumbi, izindawo eziningi zomphakathi ziklanywe ngesikhathi esisodwa, ukuze ukwazi ukujabulela isipiliyoni sokuhlala sinethezekile.
2. Izindlu zitholakala kalula, eduze kwehabhu yezokuthutha zomphakathi, eduze nendawo yedolobha laseXiaguan, kanye nendawo okuqalwa kuyo i-Haidong Scenic Line.
3. Izinkonzo ezifana ne-bartending, ibhulakufesi, ilondolo, ukuyolanda nokushiya, ukuqasha imoto kanye nokuthwebula izithombe zohambo zinganikezwa endaweni yokuhlala, ukuze uhlelo lwakho lohambo lungeke luvinjwe.
5.0 · 174 okushiwo abanye
1. Indawo iseduze nezinto zokuhamba zomphakathi, ekulungele ukuhamba, futhi iyindawo yokuqala ye-Haidong Scenic Line, elungele ukuthatha izithombe eduze nolwandle.
2. Indawo yokuhlala iyi-villa esezingeni eliphakathi nendawo, enendawo yokuhlala enhle kakhulu, enonogada abagada amahora angama-24 ngosuku, kanye nezitshalo eziningi eziluhlaza.
3. Kunemakethe yasekuseni ezansi kwentaba lapho ungathenga khona imifino, inyama nezithelo.
4. Kukhona i-Yunnan cuisine ne-Dongbei cuisine eduze kwendlu yasekhaya, elungele ukudliwa.
1. Ngizonika izivakashi indawo ehlukile ukuze zibe zodwa.
2. Uma izivakashi zidinga usizo lwami, zingangithola noma nini.
UAlisa Ungumbungazi ovelele